Lix qodob aan ku soo koobo wixii dhacay
Sunday 6th June 2021 12:30:20 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
2016 baan marar iyo mararba ku dooday Waddani oo xisbi curdin ah ahaa baahida uu u qabo in uu guulaystaa in ay ka badan tahay
ta uu u qabo in marka ugu horraysa guuldarraystaa. Waxa 2021 caawiyey waa duruustii uu ka helay maqaaddiirtii 2017 jiidhay.
2. Kulmiye ma dhicin mana guuldarraysan, waxa se soo gebageboobay muddo door ah oo uu aqlabiyadda golayaasha hoggaaminayey. Waxa bilaabmay muddo aan la sheegin karin inta ay ku siman tahay oo aqlabiyadda laga haysto. Arrintaasi waxa ay ku dhacday sababo ka yimi isla gudaha Kulmiye ee ma aha wax bannaanka uga yimi. Sidaa awgeed Kulmiye wuu turunturrooday ee xisbiyahannadiisa iyo cid kasta oo lexjeclo ka haysaa ha ka jirto in uu ku dambeeyo meeshii UDUB ku dambaysay. Dhawrkii sanaba in xisbi tacab badani galay oo waayo'arag ahi god galaa waa khasaare qaran.
3. Taariikh iyo macno ahaan doorashadan cidda koowaad ee guulaysatay waa Muuse Biixi. Hortii ma dhicin laba doorasho oo isku sidkan oo 70% qarashkeeda dawladdu bixisay cidi ma samayn, dabadii se mooyi in ay dhici doonto.
4. Abdikarim Ahmed Mooge, Barkhad Jaamac Batuun iyo Cabdirisaaq Hero waxa a si khamaar u eeg u tijaabiyeen, si qayralmacquul ahna uga warkeeneen, in tol iyo reer la'aan la socon karo, la guulaysan karo. Minfadlakum minfadlakum yaan dhabbahaa la leexin oo aan deegaanno iyo cid gaari sheeganin codadka ay ku soo baxeen ee niman qaran ha loo daayo, intaas baa ka badane. Haddii sidaa laga leexiyo, waxa niyadjabaya boqollaalkii iyo kumanaankii aanay isku reerka ahayn ee haddana u codeeyey.
5. Ciidagale dhawr iyo toban sano kaddib waxa ay gawraceen inankoodii Faysal Cali Waraabe oo ay ku sandulleeyeen in uu la midoobo nin (Cirro) oo aanu waxba ku darsadeen inta suxulkii xabaal ka sarreeyo. Haddii aanay qaawinno ama dhankii reeraha ka eegno, waa abaal labaad oo Ciidagale u galay Habaryoonis. Kii koowaad wuxuu ahaa marxuum Sanyare sidii Ciidagale ugu faruurxidhay in ay Cirro iyo Waddani taageeraan.
6. Soomaalilaan sida ay u dhan tahay rag iyo dumar way ku dhacday kaalintii haweenka
Qiimayntan waxa laga yaabaa in aan ku degdegay, waa se iga hordhac. Wixii kale waa inoo marka la miyirsado haddii Eebbe yidhaahdo.
W/Q Khadar Cabdi Cabdilaahi
Siyaasi Uur-Cadde Oo Weerar Ku Qaaday Isbahaysiga Cusub Ee Mucaaradka Somaliland & Qodobada Uu Ku Eedeeyay [ Muuqaal
Wasiir Hore Caddaani Oo Ka Hadlay Doorashadii Dalka Ka Dhacday, Farriina U Diray Madaxweynaha & Musharraxiintii Dhac
[War Hadda Soo Dhacay:-] Abwaan Axmed Saleebaan Bidde oo Culimada ka cabanaya + Maxaa Soo Kordhay?